Dhimasho & dhaawac ka dhashay shil ka dhacay wadada u dhaxaysa Bosaso & Qardho – SBC
Dhimasho & dhaawac ka dhashay shil ka dhacay wadada u dhaxaysa Bosaso & Qardho
Posted by Webmaster on November 13, 2012 Comments
Hal qof oo dhimasho ah iyo in ka badan tobon qof oo dhaawac ah ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay wadada Xiriirisa magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ka dib markii ay isku dhaceen gawaari ka kala tagtay Boosaaso iyo Hargaysa.
Shilkan oo maanta gelinkii danbe ka dhacay wadada Qayaad Same oo dhextaal u ah boosaaso iyo qardho ayaa Waxaa uu ahaa mid ay isku dhaceen Gawaari noocooda ay yihiin Market 2 i oo ay la socdeen dad Tiradooda lagu sheega 16Qof oo Isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ukala safrayay boosaaso iyo hargaysa.
Dadkii shilkaasi wax ku noqday ayaa loo kala qaaday isbitaalada qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland si xaaladooda Loogu Dabiibo sida uu SBC u xaqiijiyay Gudoomiyaha degmada Waaciye CabdiSalaam Bashiir oo isaga iyo masuuliyiin ka tirsan Maamulkiisa ay u gurmadeen dadkaasi shilka gaari galay.
Gudoomiyaha waxaa kaloo uu sheegay in gawaaridaasi yar yar ay si xad dhaaf ah ay u rarnaayeen taasna ay tahay masuuliyad Daro ku wajahan darawaldii gaadiidka iyo saraakiishii ku sugnayd kantarooladii ay ka soo ambabaxayeen waxaana uu sidoo Kale uu sheegay in wadadii shilku ka dhacay ay ahayd wado ay qariyeen dhir fara badan oo keenaysa in darawalada kaxeeya Baabuurta aysan is arkin.
Ma ahan markii ugu horaysay oo uu shil gaari ka dhaco inta u dhaxaysa Boosaaso Qardho laakiin wadada loo yaqaan Qayaad Same ayaa waxa ay ka mid tahay wadooyinka ugu shilka badan puntland iyada oo loo nisbaynayo wadada oo laab laab dheer Ah leh iyo buur dherersan oo ku lamaansan.
suldaan atoosh says:
Allah u naxariisto qofka ku dhintay inta ku dhaawacmatayna allaha caafiyo